हिड्नु राम्रो कि दगुर्नु ? – Mission
हिड्नु राम्रो कि दगुर्नु ?
एजेन्सी – तपाई छिटोछिटो हिड्न मन पराउनुहुन्छ कि दौड्न ? छिटोछिटो हिडाई र दुगुराई दुबै मुटुसँग सम्बन्धित व्यायाम हुन । तपाईको जोर्नी वा शरिरको कुनै तल्लो भागमा पीडा भएमा हिड्नु निकै उत्तम मानिन्छ । तपाईले हिडाईमा कति मात्रामा क्यालोरी सक्नुहुन्छ भन्ने विषय तपाई हिड्ने गतिमा पनि निर्भर हुन्छ । हल्का हिडाई एक प्रकारको मझौला व्यायाम हो किनकी यसले मुटुको चाल र रक्त प्रवाह बढाउनुका साथै कम प्रयत्नमा शरिरको फ्याट वा चिल्लोलाई पगाल्न सहयोग पुर्याउछ ।
अर्को तर्र्फ कुदाई वा दौड व्यायामको उपयुक्त तरिका हो । दौड्दा मुटको चाल छिटोछिटो बढ्छ र हिडाईको तुलनामा चिल्लो पर्दाथलाई धेरै पगाल्छ । यसले शरिरको क्यालोरीको मात्रालाई छिट्टै पगाल्न त सहयोग पुयाउछ तर हिडाईको तुलनामा दौड्दा शरिरको मांशपेशी र जोर्नीमा अलिक बढी दबाब पर्न जान्छ । यदि तपाईको शरिर निकै फिट छ र कुनै पीडा हुदैन भने हिड्न भन्दा दौड्न नै शरिरका लागि हितकर हुन्छ ।
हिड्नु पनि आफैमा प्रर्याप्त छ
दौड्दा हिडाईमा प्रयोग हुने भन्दा दोब्बर उर्जा खर्च हुन्छ । तसर्थ आधा घन्टा दौड्नु भनेको करिब १ घन्टा हिडे सरह नै हो । हिड्दा होस वा दौडदा शरिरबाट हस हुने उर्जाले हाइपरटेन्सन, हाइपरकोलोट्रोलेमिया, डायबिटिज मेलिटस र मुटु रोगको खतरा घटाउछ ।
त्यसो त दौडदा वा जगिङ को तुलनामा हल्का हिड्दा राम्रो हुन सक्छ । किनकी त्यहाँ एउटा क्षणिक गति हुन्छ जसका कारण हिड्न भन्दा दौड्न सहज हुन्छ । बढी गतिमा हिड्दा अझै बढी क्यालोरी नष्ट हुन्छ । मानौ तपाईको नियमित हिड्ने पाइलाको गति प्रति घन्टा चार किलोमिटर छ र क्षणिक गति ५ दशमलब ५ किलोमिटर प्रतिघन्टा रहेको छ । यस अवस्थामा ६ किलोमिटर प्रतिघन्टा हिड्नु यही गतिमा (६किमि प्रतिघन्टा) दौड्नु भन्दा राम्रो मानिन्छ ।
सक्नुहुन्छ भने दौड्नुहोस
यदि तपाई सक्नुहुन्छ भने दौडाईका धेरै फाइदा छन् । हिडाईको तुलनामा दौड्दा निकै तौल घट्छ । दौड्दा प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया (कोषसँग सम्बन्धित) समस्या ३३ प्रतिशत, गलब्लाडर सम्बन्धी रोग ५२ प्रतिशत र युरिक एसिडको समस्या ४५ प्रतिशतले न्यून हुन्छ । त्यस्तै दौड्दा हर्निया ४८ प्रतिशत, आँखासँग सम्बन्धित रोग ५४ प्रतिशत र ग्लुकोमा ४३ प्रतिशतले न्यून हुन्छ ।
हिडाईको तुलनामा स्तन क्यान्सर भएर बाँचेकाहरुको मृत्युदरमा पनि कुदाईले निकै फाइदा गर्ने गरेको विभिन्न अनुसन्धान र पर्यवेक्षणहले देखाएका छन् । पाँच वर्षमा नियमित रुपमा हिडाई र दौडाईबीच भएका तुलनात्मक अध्ययनमा हिड्दा भन्दा दौडदा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै फाईदा भएका थिए ।
गुरुत्वाकर्षणबिरुद्ध तपाईको शरिरलाई धकेल्नु भनेको धेरै राम्रो कार्य हो । तपाईको पैतलाले जमिनमा कम्पन दिदा तपाईको मांशपेशी र जोर्नीमा पनि यसको असर हुन्छ । यदि तपाईको तल्लो शरिर प्रर्याप्त रुपमा बलियो छैन भने दौडाईले घाइते पनि बनाउन सक्छ । अत्यधिक दौडाई म्याराथुन धावकहरुमा देखिने ओभर ट्रेनिङ सिन्ड्रोमले शरिरलाई संक्रमणको जोखिममा पु–याउछ । ओटीएसले कोर्टिसोल नाम गरेको हर्मनको मात्रा बढाउछ । विशेषगरी शारीरिक वा मानसिक पीडा भएको समयमा यस्तो हर्मनको बृद्धि हुन्छ । उच्च कोर्टिसोलले मोटोपन र मुटु रोगको खतरा निम्त्याउछ ।
तसर्थ दौडनु राम्रो कि हिड्नु ?
यो अवस्था हेरेर हुन्छ । किनकी दुबैका फाईदा छन् । समान्यतया हिड्दा भन्दा दौड्दाका फाईदा धेरै छन् । तर यो सबै व्यक्तिको अवस्था र उसको शारीरिक संरचनामा निर्भर पर्छ । झटपट वा छिटो छिटो हिड्दाका पनि अनौठो फाइदा छन् । तर दुईमध्ये एउटा छान्नुप–यो भने हिडाई नै तपाईको रोजीमा पर्न सक्छ । किनकी थोरै खतरा मोलेर हिडाईबाट अध्यधिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, फाल्गुन २, २०७२ 4:28:52 PM |
Prevकांग्रेस मुगुमा संस्थापनको पकड
Nextएसएलसी प्रश्न छाप्न गोप्यमा बसेका नियन्त्रकको ‘व्रेन ह्यामरेज’